“Adze Nyina Mu Hom Nda Ase”
Ɔweɔn-Aban—Dza Adzesua Nsɛm Wɔ Mu | December 2019
KENKAN WƆ Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Amis Arabic Armenian Armenian (West) Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Colombia Mmum Kasa Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuador Mmum Kasa Edo Efik English (Borɔfo) Esan Estonian Ewe (Awona) Fijian Finnish Fon French Ga (Nkran Kasa) Garifuna Georgian German German Mmum Kasa Gitonga Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Mmum Kasa Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko Indonesian Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexico Mmum Kasa Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigeria Mmum Kasa Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South Africa Mmum Kasa Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuela Mmum Kasa Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba (Alata) Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
ANA ihu woho dɛ eyɛ obi a ekyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ? Ɔyɛ asɛm a ɔwɔ dɛ hɛn mu biara bisa noho. Bible no ahyɛ nkɔm dɛ nyimpa pii bɛyɛ “bɔnyiayɛfo” wɔ hɛn aber yi do. (2 Tim. 3:2) Nyimpa bi wɔ hɔ a, wɔtse nka dɛ adze biara a hɔn nsa bɛka no, ɔsɛ dɛ wonya ntsi na hɔn nsa aka; wosusu dɛ ɔyɛ afofor hɔn asodzii dɛ wɔkyɛ hɔn adze. Ehyia dɛm nyimpa no bi pɛn a? Nyimpa a wɔtse dɛm no, ɔtse dɛ mbrɛ wɔtse nka dɛ no ho nnhia dɛ wɔkyerɛ dza hɔn nsa ka no ho enyisɔ. Bi a ebɛgye ato mu dɛ sɛ enye nyimpa a wɔtse dɛm tse a, w’ahom rennka woho.
Naaso, Jehovah n’asomfo dze wotu hɔn fo dɛ: ‘Wɔnyɛ hɔn a wɔwɔ ayɛ.’ Ɔsɛ dɛ ‘adze nyina mu wɔda ase.’ (Col. 3:15; 1 Thess. 5:18) Nokwasɛm nye dɛ, sɛ yɛkyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ a, ɔboa hɛnankasa. Yɛwɔ siantsir pii ntsi a yɛrekã dɛm.
YƐKYERƐ NDZƐMBA HO ENYISƆ A, ƆMA HƐN ENYI GYE
Siantsir tsitsir kor ntsi a ɔwɔ dɛ yɛkyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ nye dɛ ɔboa hɛn ma hɛn enyi gye. Sɛ obi yɛ biribi ma wo anaa ɔkyɛ wo adze na eda no ase a, w’enyi gye na ɔma nyimpa no so n’enyi gye kɛse. Sɛ yɛkyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ a, ebɛnadze ntsi na hɛn nye nyia ɔkyɛɛ hɛn adze no nyina enyi gye? Ma yensusu asɛm yi ho nhwɛ. Sɛ obi wɔ ɔpɛ dɛ ɔbɛgye ber ayɛ biribi ama wo a, ɔkyerɛ dɛ dɛm nyimpa no bu no dɛ efata dɛ ɔyɛ dɛm adze no ma wo. Ɔdwen woho. Sɛ ihu dɛ nyimpa no dwen woho dɛm a, w’enyi bɛgye. Bi a biribi a ɔtse dɛm na ɔkɔr do wɔ Ruth n’asɛm no mu. Boaz daa ayamuyie edzi kyerɛɛ Ruth. Ekyingye biara nnyi ho dɛ Ruth n’enyi gyee ber a ohun dɛ Boaz dwen noho no.​—Ruth 2:10-13.
Nyia ɔfata paara dɛ ebɛkyerɛ enyisɔ ama no nye Nyankopɔn. Nyankopɔn ama hɛn akyɛdze pii, na ɔkɔ do ma hɛn bi. Akyɛdze no bi yɛ sunsum afamu dze, nna bi so yɛ honam afamu dze, na ekyingye biara nnyi ho dɛ, ɔtɔ da a, dɛm akyɛdze ahorow yi ba w’adwen mu. (Deut. 8:17, 18; Andw. 14:17) Naaso, dɛ nkyɛ ebɔdwen Nyankopɔn ne papayɛ ho ber tsiabaa bi no, ebɛnadze ntsi na enngye ber mmfa nndwendwen nhyira pii a ɔama ɔwo nye w’adɔfo enya no ho. Sɛ edwendwen ayamuyie a wo Bɔfo no ada no edzi akyerɛ wo no ho a, ɔbɛma enyisɔ a ewɔ ma no no ayɛ kɛse. Afei so, iyi bɛma atse nka kɛse dɛ ɔdɔ wo na n’enyi sɔ wo.​—1 John 4:9.
Naaso, ayamuyie a Jehovah ada no edzi akyerɛ hɛn nye nhyira a ɔdze ehyira hɛn no, sɛ yɛdwendwen ho a, nna yennwiei. Ɔwɔ dɛ yɛda no ase so wɔ ne papayɛ no ho. (Ndw. 100:4, 5) Wɔkã dɛ “sɛ eda nkorɔfo ase wɔ dza wɔyɛ ma wo no ho a, ɔma hɔn enyi gye kɛse.”
SƐ OBI YƐ ADZE MA WO NA EDA NO ASE A, HOM NTAMU ANYƐNKOFA NO MU BƐYƐ DZEN
Siantsir fofor ntsi a oye ma hɛn dɛ yɛkyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ nye dɛ ɔhyɛ anyɛnkofa a yɛnye afofor wɔ no mu dzen. Ɔsɛ dɛ hɛn nyina yɛkyerɛ enyisɔ ma hɛnho. Sɛ obi da ayamuyie edzi kyerɛ wo na ifi w’akoma mu da no ase a, anyɛnkofa a ɔda hom ntamu no mu bɛyɛ dzen. (Rom. 16:3, 4) Bio so, nyimpa a wɔkyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ no, wɔtaa boa afofor. Sɛ afofor da ayamuyie edzi kyerɛ hɔn a, wohu na iyi kenyan hɔn ma hɔn so wɔda ayamuyie edzi. Nokwar mu no, sɛ eboa afofor a, ɔma w’enyi gye. Iyi nye asɛm a Jesus kãe no hyia: “Ɔma yɛ nhyira kyɛn ɔgye.”​—Andw. 20:35.
Nyimpa bi a wɔwɔ University of California yɛɛ nhwehwɛmu bi faa enyisɔ a wɔkyerɛ ho. Robert Emmons ka mpanyimfo a nna wɔda dɛm dwumadzi yi ano no ho. Ɔkãa dɛ: “Sɛ yɛbɛyɛ nyimpa a yɛkyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ a, ɔwɔ dɛ yɛtse ase dɛ ɔdasanyi biara hia ne nyɛnko nyimpa. Ɔtɔfabi a yɛbɛkyɛ afofor adze, na ɔtɔfabi so a afofor bɛkyɛ hɛn adze.” Nokwasɛm nye dɛ sɛ yɛbɔkɔ do atsena ase na yeenya enyigye wɔ asetsena mu a, yebehia afofor hɔn mboa wɔ akwan pii do. Dɛ nhwɛdo no, wobotum ama hɛn edziban anaa wɔaaboa hɛn ber a yɛyar no. (1 Cor. 12:21) Ɔda edzi kofee dɛ obi a ɔkyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ no, n’enyi sɔ dza afofor yɛ ma no no. Dɛm asɛm yi wɔ w’adwen mu no, bisa woho dɛ, Ana medze ayɛ mo su dɛ mebɛkyerɛ enyisɔ wɔ dza afofor yɛ ma me no ho?
SƐ YƐKYERƐ NDZƐMBA HO ENYISƆ A, ƆMA YENYA NDZƐMBA HO ADWEN PA
Adze fofor ntsi a oye ma hɛn dɛ yɛbɛkyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ nye dɛ, sɛ yɛda ase wɔ dza afofor yɛ ma hɛn no ho a, ɔboa hɛn ma yɛdze hɛn adwen si ndzɛmba papa do kyɛn dɛ yɛdze besi ndzɛmba a ɔhaw adwen do. Kwan bi do no, hɛn adwen no yɛ edwuma tse dɛ sɔnee, na ɔsɔn ndzɛmba a yɛdwendwen ho no do. Ɔma yetum dze hɛn adwen si ndzɛmba pɔtsee bi a woetwa hɛnho ehyia no do, na ber kor no ara so otum siw nsusui ahorow bi kwan. Dɛm ntsi, yebotum dze hɛn adwen esi ndzɛmba papa do na yeeyi hɛn adwen efi dza ɔhaw adwen do. Sɛ etaa kyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ a, ɔma w’adwen taa kɔ ndzɛmba papa a nkorɔfo yɛ ma wo no do ntsɛm, na iyi bɛma akɔ do akyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ kɛse. Sɛ ekɔ do dze w’adwen si ndzɛmba a ibotum ada ase wɔ ho no do a, ɔbɔboa ma aayɛ dza ɔsomafo Paul kãe yi: “Hom ndzi dɛw wɔ Ewuradze mu daa.”​—Phil. 4:4.
Sɛ eyɛ obi a ekyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ a, ɔbɔboa wo ma eekwetsir dɛ ibenya nsusui a ɔmmfata. Ɔbɛyɛ dzen dɛ ebɛkyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ na ber kor no ara so ebɛyɛ ahoɔyaw, wo werɛ bɔhow, anaa wo bo bofuw. Afei so, nyimpa a wɔkyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ no mmper nnhwehwɛ honam afamu ahonyadze. Kakra a wɔwɔ no, wɔma hɔn enyi sɔ, na wɔmmper nnhwehwɛ pii nnka ho.​—Phil. 4:12.
DWENDWEN NDZƐMBA PAPA A ENYA NYINA HO!
Christianfo nyim dɛ dza Satan pɛ ara nye dɛ ɔhaw a yehyia wɔ nda a odzi ekyir yi mu no bɛma hɛn abaw mu ebu na yeedzi awerɛhow. Sɛ ennkyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ na ihwinhwin a, ɔma Satan n’enyi gye. Naaso, su a ɔtse dɛm bɛma ayɛ dzen ama nkorɔfo dɛ wobetsie wo ber a erekã asɛmpa no. Nokwar mu no, ndzɛmba ho enyisɔ a ebɛkyerɛ nye Nyankopɔn no sunsum aba no wɔ ebusuabɔ. Dɛ nhwɛdo no, sɛ yɛhwɛ ndzɛmba papa a Nyankopɔn dze ama hɛn a, ɔma hɛn enyi gye, na yenya gyedzi so wɔ no bɔhyɛ a ɔfa daakye ho no mu.​—Gal. 5:22, 23.
Eyɛ Jehovah Adasefo no mu kor yi ara dze, dza yɛakã afa enyisɔ ho wɔ asɛm yi mu no, bi a egye to mu. Naaso, ebɛgye ato mu so dɛ nnyɛ aber nyina na ɔyɛ mberɛw dɛ ibenya ndzɛmba ho adwen pa na aakyerɛ ho enyisɔ. Mma iyi mmbu w’abaw mu. Ibotum enya su pa a ɔbɛma akyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ, na aakɔ do ada su a ɔtse dɛm edzi. Ebɛn kwan do? Da biara, gye ber susu ndzɛmba ahorow bi ho wɔ w’asetsena mu a ibotum akyerɛ ho enyisɔ. Sɛ eyɛ dɛm a, nkakrankakra ɔbɛyɛ mberɛw ama wo koraa dɛ ibefi wo pɛ mu akyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ. Iyi bɛma w’enyi agye asen hɔn a wɔdze hɔn adwen si ɔhaw a wohyia wɔ asetsena mu no do. Ndzɛmba papa a Nyankopɔn nye afofor yɛ ma wo a ɔma inya nkuranhyɛ na enyigye no, ɔyɛ a dwendwen ho. Ibotum ahyɛ ase akyerɛw ndzɛmba a ɔtse dɛm ato hɔ. Da biara, ndzɛmba ebien anaa ebiasa bi a ɔma w’enyi gye no, ibotum akyerɛw ato hɔ.
Hɔn a wɔyɛ nhwehwɛmu wɔ enyisɔ a wɔkyerɛ ho kã dɛ, “sɛ yɛtaa da nkorɔfo ase wɔ ndzɛmba a wɔyɛ ma hɛn no ho a, obotum asesa mbrɛ hɛn adwen no si yɛ edwuma fa, na iyi bɛma ayɛ mberɛw ama hɛn dɛ yebenya enyigye wɔ hɛn asetsena mu.” Obi a ɔkyerɛ ndzɛmba ho enyisɔ no, ɔwɔ enyigye kɛse. Ntsi, dwendwen ndzɛmba papa a enya nyina ho, fa dɛm ndzɛmba no dzi dwuma ma w’enyi ngye, na kyerɛ ho enyisɔ daa! Dɛ nkyɛ ibobu w’enyi egu ndzɛmba papa do no, mbom ‘fa ndaase ma Jehovah; na oye.’ Ampa, ‘adze nyina mu yɛnda ase.’​—1 Mber. 16:34; 1 Thess. 5:18.
Fa mona Fa mona “Adze Nyina Mu Hom Nda Ase”
Edwuma Wɔ N’aber, Na Ahomgye So Wɔ N’aber
Jehovah Ayɛ Fahodzi Ho Nhyehyɛɛ Ama Wo
Ana Inyim Jehovah Yie Paara?
Awofo​—Hom Ntsetse Hom Mba Ma Wɔndɔ Jehovah
Nsɛm A Wɔahyehyɛ, Afe 2019 Ɔweɔn-Aban
Text Kyerɛ no mu dza epɛ dɛ etwẽ na ekenkan ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU December 2019
Fa mona Fa mona ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU December 2019
ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU December 2019